May 2022 - Online Hartha
နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်က နတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့ အဖြစ်
May 30, 2022 by Online Hartha
နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်က နတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ် နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်ကနတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ်… လူကောင်းကို အနိုင်ကျင့်ရတာ လွယ်တယ် ၊ပုံပြင်ကလေးက ဒီလိုဗျ… တခါက ရွာတရွာမှာ ရွာဦးနတ်ကွန်းဘေးမှာ ရေနှုတ်မြောင်း ဖြတ်စီးနေတယ် နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်က မတ်တတ်ကိုယ်တော်ကြီး ၊ တနေ့တော့ လူတယောက်က မြောင်းဘောင်အတိုင်း လျှောက်လာပြီး ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးမယ်လုပ်တယ် ၊ အဲ့မြောင်းထဲမှာ ရေတော်တော်များနေတယ်။ ညက မိုးရွာထားတာကိုး ၊ ခုန်ကူးရအောင်ကလဲ မမီမကမ်းနဲ့ ၊ မြောင်းထဲ ဆင်းကူးယင်လဲ ရေစိုမယ်လေ ၊ ပြီးတော့ ဒီလူကလဲ ခပ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်ကြီးကို ဆွဲချလာ၊ မြောင်းပေါ်ခွကျော်ပီး ချ၊ပီးမှ နတ်ရုပ်ကြီးကို တုံးတံတားလုပ်ပြီး မြောင်းကို ကူးသွားတယ် ၊ ဟိုဘက်ကမ်းအဆင်းမှာ နတ်ရုပ်ကြီး မျက်နှာခွက်ကိုတောင် ဆောင့်နင်းသွားလိုက်သေးသတဲ့ … Read more
ကြွက်တွေ တကယ်ပြေးလို့ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ကြွက်တွေ တကယ်ပြေးလို့ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ‘ကြွက်တွေပေါနေရင် ကြွက်ပြေးသော ဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး ကြွက်တွေ တကယ်ပြေးလို့ ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ‘ကြွက်တွေပေါနေရင် ကြွက်ပြေးသော ဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး ကြွက်ပြေးသော လင်ဇီးဒါဏ်ကြေလိမ်းဆေး ကြွက်တွေက ပေါလိုက်တာ့ ပေါတာမှ စာအုပ်တွေကိုက် အဝတ်တွေကိုက် ညကျတော့ တစ်ဝုန်းဝုန်းနှင့်လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားကြ ကျိန်းမရအောင်ဖြစ် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်လှမ်းအော်ကြ တစ်ခါတလေများဆို ပြေးရင်းလွှားရင်းခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ဒိုင်ဘင်ထိုးချလွန်တာမှအတော်လွန့််အဲ့ဒါနှင့်ကလေးတွေက ထောင်ချောက်ထောင်မယ်လျှောက်တယ့် မလုပ်နှင့် ဆေးကျွေးမယ်ဆိုတယ့်လုံးဝမလုပ်နှင့်ပေါ့…. အဲ့ဒါနှင့်တစ်နေ့ကျတော လက်မောင်းအောင့်လို့လင်ဇီးဒါဏ်ကြေဆေးလိမ်းတယ့် ပူလိုက်တာ အခိုးကလည်း မွှန်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ် လူတောင်အနံ့ခိုးရတာနှင့်မျက်ရည်ကျရတယ် ဟိုအကောင်တွေ(ကြွက်)ဆိုဘယ်လိုနေမလဲမသိ့ သူတို့နှာခေါင်းကရှေ့ရောက်နေတာဆိုတော့ ပိုပြီးအနံ့ရမှာပဲဆိုပြီးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ ဆိုတော့ ကျောင်းသားသုံးယောက်ခေါ် ကြွက်လာလမ်း လျှောက်လမ်းတွေ လင်ဇီးတွေ ထူထူသုတ်ပြီးအသာနေလိုက်တာ့ ည(၁၀)နာရီလောက်ကျတော့ သောင်းကျန်းဖို့လာနေကြအချိန်အတိုင်း ကြွက်တစ်အုပ်ရောက်လာပါရော ရှေ့ဆုံးကအကောင်က သုတ်ထားတဲ့လင်းဇီးနှင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျ့… သူ့ပါးစပ်ကအော်ချင်တာအော်ပြီး ထွက်ပြေးအဲ့ဒီလိုနှင့်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်ဖြစ်ရော.. နောက်ကကြွက်တစ်အုပ်ရှေ့ဆက်မတက်ပဲ အသိုက်ပါပြောင်းတယ်ထင်ပါရဲ့…ခုဆိုကြွက်တွေလာမသောင်းကျန်းတာသုံးရက်ရှိပြီ….. ကျေးဇူးပါလင်ဇီ်းရေ့ သူ့အသက်မသေပဲ … Read more
ဥပေဒသစ် ဝန်ထမ်းကောင်း ရှားလွန်းတဲ့ မြန်မာပြည် (ပြုပြင်ကြဖို့ လိုပါတယ်)
ဥပေဒသစ် ဝန်ထမ်းကောင်း ရှားလွန်းတဲ့ မြန်မာပြည် (ဆိုင်ရှင် ကြိုးစားလည်း ဝန်ထမ်း မကောင်းရင် ဆိုင်ပြုတ် ပါတယ်) ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က မနက်စာထွက်စားပြီး ပြန်အရောက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့စာပါ။ အဲ့ဒီ Bistro ဆိုင်ကလေးဟာ နောက် ၄ လလောက်မှာပိတ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ နေ့လည်ဘက်သွားစားတော့ ဆိုင်ရှင်က အတော့်ကို ကြိုးစားတာတွေ့ရပါတယ်။ “ခက်တာက စိတ်ချရတဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်း မြန်မာပြည်မှာ ရှားတယ်။” “ဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်ဖူးမှ ဆိုင်ရှင်ကောင်းဘဝကို ရမယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး။” ရန်ကုန်မှာ စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်ခန်းငှားခနဲ့တင် ရပ်တည်ဖို့မလွယ်ပါ။ အဲ့ဒါကိုမှ ဝန်ထမ်းတွေပါ အလုပ်ကို တန်ဖိုးမထားတတ်ရင် ဆိုင်တွေကပြုတ်၊ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်အကိုင်မမြဲ၊ သံသရာကလည်နေပါရော။ “မပြုပြင်ကြရင် အလုပ်အကိုင်ပေါများတဲ့ လူ့အသိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ပါ။”ပြုပြင်ကြပါမောင်ရင်တို့၊ အခုပဲ … Read more
အိမ်တစ်အိမ်မှာ လာဘ်မပိတ်အောင် ဒါတွေကိုရှောင်ပါ
May 29, 2022 by Online Hartha
အိမ်တစ်အိမ်မှာ လာဘ်မပိတ်အောင် ဒါတွေကိုရှောင်ပါ စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ လာဘ်မပိတ်အောင် ဒါတွေကိုရှောင်ပါ ကလေး လူကြီး လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အရာတွေပါ။ “လူ့ဘဝမှာ စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားလာဘ်လာတွေ ပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့အိမ်ဟာ သီရိမင်္ဂလာမရှိတော့ပါဘူး။ အမင်္ဂလာအိမ်ပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ဒီတော့ ဒါတွေရှောင်ပါ – ရဟန်းသံဃာတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော ကျောင်းပစ္စည်းများကို အိမ်သို့ ယူဆောင်အသုံးမပြုရပါ။ ဥပုဒ်နေ့တွင်ခေါင်းမလျှော်ရပါ။ ဘုရားညောင်ရေအိုး အရေအတွက်ကို စုံဂဏန်းမထားကောင်းပါ။လင်ယောက်ျား၏လက်ယာဘက်၌ ဇနီးသည်ကိုမအိပ်စေရပါ။ မိမိထက် အသက် ပညာ အရွယ် ဂုဏ်ကြီးမြင့်သူ၏အမြင့် တစ်နေရထက်၌ မထိုင်ရပါ။ ဝါတွင်း၌အိမ်ထောင်မပြုရပါ။ ဝါတွင်း၌ အိမ်မပြောင်းရသလို ခေါင်းအုံးလည်း မချုပ်ရပါ။ ဈေးဆိုင်၏ စားပွဲများ ကောင်းတာများ၌ လက်ထောက် မေးထောက်ခြင်းများမပြုရပါ။ ပြာသိုလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင် အိမ်မပြောင်းရပါ။ ကျောက်နီလက်စွပ်ကို နှစ်ကွင်းထပ်၍ မဝတ်ရပါ။ မျက်ရည်ခံမှဲ့ပါသူကို … Read more
ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများအတွက် ဒါလေးတွေ လုပ်လိုက်ပါ အိုကေ သွားလိမ့်မယ်နော်
ပုံမှန် ဝင်ငွေရှိပြီး လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ မစုမိသူများ အတွက် ပိုက်ဆံ စုတယ် ဆိုတာ ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ထားပြီး ရေရှည် တည်ဆောက် ထားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… ။ ငွေကြေး အောင်မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက် ဝင်တယ် ဆိုတာထက် ဘယ်လောက် စုနိုင်တယ် ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်… ။ လူတွေက မဝင်သေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို မျှော်ကိုးပြီး အကြွေး ယူတတ်ကြတယ်… ။ ဒါက အဓိက မှားယွင်းနေတဲ့ အချက်ပဲ… ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုက်ဆံစုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လို ဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆိုတာ အချက်ကျကျ တင်ပြချင်ပါတယ်. . . ။ ။ ၁။ သုံးပြီးမှ မစုလေနဲ့… … Read more
ဆံပင်အရှည်နှေးလို့ စိတ်မရှည်တဲ့သူတွေအတွက် တစ်လအတွင်း သိသိသာသာဆံပင်ရှည်စေရန်
ဆံပင်က ဒုတိယမျက်နှာဆိုတာ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ဆံပင်ပုံစံကကိုယ်နဲ့မလိုက်ရင် လုံးဝမလှတာလည်း အားလုံးအသိပါပဲ။ ဆံပင်အရှည်ထားချင်ပေမယ့် စိတ်မရှည်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ တစ်လအတွင်း ဆံပင်ရှည်လွယ်ပြီးတောက်ပြောင်စေမယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) မကြာခဏအဖျားတိပေးပါ ဆံပင်အဖျားလေးတွေကို မကြာခဏတိပေးတာက ဆံပင်ရဲ့မကျန်းမာတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆံပင်ကိုကျန်းမာတောက်ပြောင်တဲ့အသွင်မျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ (၂) ခေါင်းလျှော်တိုင်းပေါင်းဆေးသုံးပေးပါ ခေါင်းလျှော်တိုင်းဆံပင်ပေါင်းဆေးသုံးပေးတာက ဆံသားခြောက်သွေ့တာ၊ ဆံပင်တွေညှိပြီးပြတ်တာတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံပင်ပိုရှည်အောင် အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလျှော်တိုင်းဆံပင်ပေါင်းဆေးကိုမဖြစ်မနေသုံးပေးပါ။ (၃) သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ပေါင်းတင်ပါ ဆံပင်ရှည်လွယ်ချင်သူတွေအနေနဲ့ သဘာဝအသီးအနှံတွေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နီတစ်လုံးကို အတုံးလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိတ်ပြီးအရည်ညှစ်ပါ။ ရလာတဲ့အရည်ကို သံလွင်ဆီအနည်းငယ်နဲ့ရောပြီး ဦးရေပြားနဲ့ဆံပင်အနှံ့ရွှဲနေအောင်လိမ်းပေးကာ နာရီဝက်လောက်ကြာရင် ခေါင်းလျှော်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းကို တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လုပ်ပေးရင် တစ်လကြာတဲ့အခါ ဆံပင်သိသိသာသာရှည်လာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ (၄) သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံတဲ့နည်းကိုသုံးပါ ဆံပင်ရှည်လွယ်ချင်သူတွေက ဆံပင်နဲ့ဦးရေပြားကို တတ်နိုင်သလောက်အပူမထိအောင် ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ တဘက်နဲ့ရေစင်အောင်သုတ်ပြီး သဘာဝအတိုင်းအခြောက်ခံတာက အကောင်းဆုံးပါ။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သေသေချာချာလိုက်နာပြီး … Read more
“ပထမကို ဦးစားပေးပါ” လူတိုင်းလိုလိုက ကမ္ဘာကြီးကိုတော့ ကယ်တင်ချင်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ အမေပန်းကန်ဆေးနေတာကို ဝိုင်းကူဖို့ မစဉ်းစားကြဘူး။ လူတစ်ချို့က ပရဟိတတော့ လုပ်ချင်နေကြတယ် အိမ်က အဖေ ထင်းခွဲနေတာကိုတော့ ကူလုပ်မယ်လို့ မစဉ်းစားကြဘူး။ လူတစ်ချို့က ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ငိုနေတာကိုတော့ သနားပြီးခံစားနေကြတယ်… အိမ်က မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲကဒဏ်ရာတွေကိုတော့ မြင်အောင်မကြည့်ကြဘူး။ ပထမရဲ့ တန်ဖိုးကိုမသိဘဲ ဒုတိယရဲ့ တန်ဖိုးကို မက်မောနေသမျှ ပထမနဲ့ဝေးကွာနေရဦးမှာပါ။ အဓိက နဲ့ သာမည ခွဲခြားတတ်ပါစေ။မယောင်ရာ ဆီမလူးချင်ပါနဲ့။ တန်ဘိုးထားရမယ့်သူကို တန်ဘိုးထားပါ။ရွာကျော် ခဲ မပေါက်ချင်ပါနဲ့။ #Credit Unicode Version “ပထမကို ဦးစားပေးပါ” လူတိုငျးလိုလိုက ကမ်ဘာကွီးကိုတော့ ကယျတငျခငျြကွတယျ ဒါပမေဲ့ အမပေနျးကနျဆေးနတောကို ဝိုငျးကူဖို့ မစဉျးစားကွဘူး။ လူတဈခြို့က ပရဟိတတော့ လုပျခငျြနကွေတယျ … Read more
၁၅ မိနစ်အတွင်း ခြေထောက်နဲ့လက် ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်း
၁၅ မိနစ်အတွင်းဆိုတော့ မှတ်သားထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ခြေထောက် လက် ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ပေါ်က ညိုတဲ့နေရာတွေ ဆဲသေတွေကိုဒီဖော်မြူလာနဲ့ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ အဆင့်နှစ်ဆင့် က ဒီလိုပါ။ အဆင့် ၁ ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းကို သင့်လက်ပေါ်တင်လိုက်ပါ။အုန်းဆီတစ်ဇွန်းကို အဲ့ထဲထည့်လိုက်ပါ။ ဆားနဲ့အုန်းဆီကို ရောပြီး သင့်တံတောင်နဲ့ ဒူးကို လိမ်းလိုက်ပါ။ ၅ မိနစ် ညင်သာစွာပွတ်ပေးပါ။ အဆင့်၂ သံပယိုရည်- လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း ဗီတာမင် အီး ဆေးသုံးလုံး ဂလစ်စရင်း အလှဆီ တစ်ဇွန်း နွားနို့ ၃ ဇွန်း ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောလိုက်ပါ။ အရည်ပုံစံလုပ်ပြီး သင့်ဒူးနဲ့ တံတောင်ဆစ်ကို လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ ထားပေးပါ။ ဒီအဆင့် နှစ်ဆင့်ကို တစ်ပတ်မှာ သုံးကြိမ်လုပ်ပေးပါ။ မကြာခင် သင်တောက်ပတဲ့အသားအရေကို ရရှိပါလိမ့်မယ်…။ … Read more
ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေ လွှင့်ပစ်ခဲ့တာ ခုမှ မှားမှန်းသိတော့တယ်
ရေနွေးကြမ်းအိုးထဲက လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေမလွှင့်ပစ်ဘဲ သုံးတတ်ရင် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား? ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ငါးကတော်တော်ညှီတဲ့ ငါးဆိုရင်လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်နဲ့အတူ ညှီနေတဲ့ငါးကို အိုးတစ်ခုတည်းထည့်ပြုပ်လိုက်ပါ။ ငါးညှီနဲ့ လုံးဝ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ လက်ဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ရောပြီး မှန်ပြတင်းပေါက်အိမ်သုံးပစည်းနဲ့ ရွှံ့ပေနေတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ်တွေကို ဆေးကြောပွတ်တိုက်ပါ။ ပြီးမှ အဝတ်သန့်နဲ့ ပြန်သုတ်လိုက်ပါ။ သန့်ပြီးတောက်ပြောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ ရောစပ်ပြီး မြေသြဇာရည်အဖြစ် အပင်တွေကိုလောင်းပေးနိုင်ရင် သဘာဝ မြေသြဇာကို ရရှိစေပြီး အပင်တွေကို သန်စွမ်း ကျန်းမာစေပါတယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို အခြောက်လှမ်းပြီး ကြက်ဥနဲ့ ပြုပ်စားရင် မွှေးကြိုင်ပြီး အရသာ ရှိလှပယ်။ လဖက်ခြောက်ဖတ်ကို အခြောက်လှမ်းပြီး မီးရိူိ့ရင် အနံ့အသက်ဆိုးတွေပျောက်တဲ့အပြင် ခြင်လည်း ပြေးတယ် ။ ခြင်ဆေးခွေ အစားထိုးလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။လဖက်ခြောက်ဖတ်တွေကို နေလှန်းပြီးခေါင်းအုံးထဲထည့် ခေါင်းအုံးအိပ်ရင်ပျော့ပြောင်းစွာအိပ်စက်ရရုံတင်မက အပူကိုပါ … Read more
ချမ်းသာချင်တဲ့လူတိုင်း အတုယူသင့်တဲ့ တရုတ်ကုန်သည်တွေရဲ့ လှည့်ကွက်နဲ့ စီးပွားရှာကြပုံများ
ချမ်းသာချင်တဲ့လူတိုင်း အတုယူသင့်တဲ့ တရုတ်ကုန်သည်တွေရဲ့ လှည့်ကွက်နဲ့ စီးပွားရှာကြပုံများ တလောက ရွှေလီမြစ်ထဲ ပြောင်းဖူးတွေသွန်ပစ်တဲ့သတင်းတွေ ဖရဲသီးတွေ ရောင်းမရလို့ဆိုပြီး ဒါးနဲ့ခုတ်ပြီး လွှင့်ပစ်တဲ့ ဗီဒီယိုတွေ တက်လာတော့ ကျနော်တရုတ်ပြည်မှာ သွားနေခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်ကိုသတိရတယ်၊ တရုတ်တွေက စီးပွားရေးကို စီးပွားရေးလိုဘဲလုပ်ပါတယ် ကျနော့သူငယ်ချင်းပြောဖူးတာက စီးပွားရေးမှာ အားနာတာတို့ ကိုယ်ချင်းစာတာတို့ သနားတာတို့ သွားလုပ်ရင်‌ ရေရှည်မှာမွဲမှာတဲ့၊ကျနော်လဲအဲ့စိတ်ကြောင့်မွဲခဲ့ဖူးပါတယ်၊ အဲ့နောက်ပိုင်း သိပ်မအားနာတတ်တော့ပါ၊ ဘဝကသင်ပေးတယ်လို့ဘဲ ပြောရမှာပါ။ တရုတ်တွေက သီးနှံပေါ်ချိန်ဆို မြန်မာပြည်ကနေ အသီးအနှံတွေ ကားအစင်းလိုက်ဝယ်ပါတယ်၊ ဖရဲသီး သရက်သီး ပြောင်း အစုံဝယ်ပါတယ် ဝယ်ဝယ်ခြင်းလဲဈေးကို ပုံမှန်ပေါက်ဈေးထက် မြှောက်ပီးဝယ်ပါတယ်၊ အဲ့လိုဝယ်လို့ ကျယ်ဂေါင်ထဲမှာရော မူဆယ်မှာရော ဖရဲကား ပြောင်းကား သရက်ကားတွေပုံအောလာပီဆိုတာနဲ့အဝယ်ချပါလေရော.. သီးနှံကပုတ်ကုန်ပါ ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြ အချိန်ဆွဲပါတယ် နောက်ဆုံးကုန်သည်က စရိတ်ထောင်း ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ … Read more